सामसङ ग्यालेक्सी नोट ८ नेपाली बजारमा, मूल्य १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि - Technology Khabar
» सामसङ ग्यालेक्सी नोट ८ नेपाली बजारमा, मूल्य १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि
सामसङ ग्यालेक्सी नोट ८ नेपाली बजारमा, मूल्य १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि
Technology Khabar २ आश्विन २०७४, सोमबार
काठमाडौं, २ असोज। सामसङको नयाँ उत्पादन ‘सामसङ ग्यालेक्सी नोट ८’ (Samsung Galaxy Note 8) नेपाली बजारमा सोमबार सार्वजनिक हुँदैछ । कम्पनीले विश्व बजारमा सार्वजनिक गरेको एक महिना भित्रै नेपाली बजारमा सामसङ ग्यालेक्सी नोट ८ ल्याउन लागेको हो ।
विश्व बजारमा कम्पनीले निकै अाशा र अपेक्षासहित नोट ८ सार्वजनिक गरेको भएपनि नेपालमा भने निकै सानो तहमा कार्यक्रम गरेर ‘सामसङ ग्यालेक्सी नोट ८’ बजारमा आएको जानकारी दिन लागिएको छ । यसको लागि कम्पनीले आफ्नै भवनमा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
यसअघि नोट सेभेनमा ब्याट्री पड्किने समस्या आएपछि सामसङको नोट सिरिजमा नयाँ फोन आएपनि नेपाली बजारमा भने यसको चर्चालार्इ आइफोन ८ र एक्सको सार्वजनिकीकरणले ओझेलमा पारिदिएको छ ।
यो ठुलो डिस्प्लेयुक्त फ्ल्यागसिप स्मार्टफोन हो । फोनमा ड्यूल रियर क्यामरा दिइएको छ भने, एस पेन स्टाइल पनि उपलब्ध छ।
नोट सिरिजलार्इ अगाडि बढाउन यसले निकै सहयोग गर्ने आशाका बीच यसमा कम्पनीले नयाँ फीचरहरु थप गरेको छ ।
यसका विशेषताहरु के के छन त ?
डिस्प्ले : यो फोनमा ६.३ इन्चको क्वाड एचडी इन्फिनिटी डिस्प्ले जडान गरिएको छ । किनारामा बेजल्स राखिएको छ भने फोनको स्क्रीन सुपर एमोलेड रहेको छ, जसको पिक्चर रिजोलुसन १४४०X २९६० पिक्सल रहेको छ । क्वाड डिस्प्लेलाई सुरक्षा दिन गोरिल्ला ग्लासको प्रयोग गरिएको छ । यो फोन ब्ल्याक, ग्रे, डिप व्लू र गोल्डन कलरमा सार्वजनिक भएको छ ।
प्रोसेसर : अक्टाकोर स्न्यापड्रागन ८३५ र एक्सोनेट ८८९५ प्रोसेसर प्रयाेग गरिएको छ । अमेरिका र भारत बाहेकका देशमा एक्सोनेट ८८९५ चिपमा मात्र उपलब्ध हुने छ । कम्पनीले यसमा र्याम क्षमतामा पनि वृद्धि गर्दै ६ जीबी र्याम राखेको छ । यो फोन ३ वटा अान्तरिक स्टोरेज क्षमतामा उपलव्ध हुन्छ । ६४ जीबी, १२८ जीबी र २५६ जीबी स्टोरेज क्षमता ग्राहकले आवश्यकता अनुसार छनोट गर्न सक्ने छन् ।
व्याट्री : नोट ८ मा ३३०० एमएएच क्षमताको व्याट्री जडान गरिएको छ । यसअघि नोट सेभेनमा ३५०० एमएएच ब्याट्री प्रयोग गरिएको थियो । तर सुरक्षाका कारण नयाँ नोट फोनमा कम क्षमताको ब्याट्री राखिएको छ ।
क्यामरा : फोनमा ड्युल क्यामेरा लेन्सको प्रयोग भएको छ । दुबै रियर क्यामेरा अप्टिकल इमेल स्टेबलाइजरसहितको १२ मेगापिक्सलको छ भने सेल्फीका लागि फ्रन्ट क्यामेरा ८ मेगापिक्सलको रहेको छ ।
डिजाइन : सामसुङ ग्यालेक्सी एस ८ डिजाइनको आधारमा तयार पारिएको यो नोट ८ हेर्दा ग्यालेक्सी ८ जस्तै रहेको छ । यो फोन ग्लास र मेटल बढीको समिश्रणले निर्माण गरिएको छ । साथै अगाडी र पछाडिको भागमा आर्कषक डिजाइन गरिएको छ । डिजाइनको पछाडि भागमा फिङगर प्रिन्ट स्क्यानर जडान गरिएको छ ।
यो फोनमा सामसङको बिक्स्बी पनि छ साथै कम्पनीले नयाँ भीआर गियर तथा डेक्स वर्कस्टेसनको सपोर्ट पनि दिएको छ ।
मूल्य: यो फोन सेप्टेम्बर १५ देखि विश्व बजारमा बिक्रीका लागि उपलब्ध भएको छ।
नेपालमा भने यसको लागि प्रि अर्डर गर्नुपर्नेछ ।
अमेरिकी बजारमा सामसङ ग्यालेक्सी नोट ८ को मुल्य ९३० डलर रहेको छ । नेपालमा भने यसको मूल्य १ लाख २ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसको प्रि अर्डरमा सामसङ कन्भर्टिबल वायरलेस चार्जर उपहारमा ग्राहकले पाउनेछन् ।
त्यसैगरी एनसेलको १६ जीबी डाटा निशुल्क उपलब्ध छ भने शिखर इन्स्योरेन्सबाट ८ महिनासम्मका लागि ब्रेकेज इन्स्योरेन्स स्मार्ट एकाडेमी र भीआइपी सर्भिस एक्सेस सेवा कम्पनीले दिनेछ ।
सामसङ ग्यालेक्सी नोट ८ प्रि अर्डर गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०७४, सोमबार
सुस्तगतिको नेटवर्कका लागि ‘फेसबुक लाइट’ आयो
२२ जेष्ठ २०७२, शुक्रबार
लकडाउनमा भुक्तानीलगायत कारोबारमा समस्या भयो ? यी हुन् डिजिटल पेमेन्टका सजिला विकल्प
स्मार्ट टेलिकमसहित ३ कम्पनीले पाए किस्ताबन्दीको सुबिधा, लाइसेन्स खारेज हुनबाट बच्यो
नेपालमा दुई करोड २२लाख बढि मोबाइल प्रयोगकर्ता, ३३प्रतिशत जनता इन्टरनेटको पहुँचमा
१० कार्तिक २०७१, सोमबार
सुरक्षा कमजोरी हेर्न जूमद्धारा फेसबुकका पूर्व सेक्यूरिटी चीफलाई नियुक्त, नयाँ अपडेट समेत जारी
ओबी वर्ल्डफोन ब्राण्ड नेपाल भित्रियो, डिजाइनका ध्यान दिईएका आकर्षक फोनहरु आउँदै
गेमिङ्ग एपमध्ये पबजी मोबाइलको आम्दानी दोस्रो त्रैमासमा सबैभन्दा धेरै
कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्जा कनेक्ट आईपिएसमार्फत जम्मा गर्न सकिने
सिंगापुरमा भित्रने यात्रुहरूले क्वारेन्टाइन बस्दा इलेक्ट्रोनिक अनुगमन उपकरण लगाउनुपर्ने
ह्वाट्सएपमा मेसेन्जर रुम्स इन्ट्रीगेशन उपलब्ध हुँदै, आफ्नो स्क्रीन समेत शेयर गर्न सकिने